पालिकाको सम्पूर्ण ध्यान राहत र जनताको सुरक्षामै केन्द्रित छ | Sindhu Jwala
दाबुटी शेर्पा लामा -उपाध्यक्ष_
भोटेकोशी गाउँपालिका, सि.पा
यतिबेला भोटोकोशी गाउँपालिका बाह्रबिसे नगरपालिका लगाएत क्षेत्रहरु बाढीपहिरोका कारण अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको छन् । पछिल्लो पटक आएको बाढीपहिरोका कारण सो क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति समेत भयो । साउन यता भएका बाढीपहिरोका घटना पछि उद्वार र राहतमा स्थानीय सरकार, सुरक्षाकर्मीहरुका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु समेत खटिएका छन् । बाढी पहिरोका कारण बाह्रबिसे तातोपानी खण्कको सडक समेत अवरोध बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अवस्थामा उद्वार राहतमा स्थानीय सरकारको भूमिका लगाएत समसामायिक विषयमा भोटेकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामासंग सिन्धुज्वाला अनलाईनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक
१) तपाई भोटेकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लोपटक बाढी पहिरोका कारण भोटेकोशी गाउँपालिकाको अवस्थाको बारेमा बताईदिनुहोस ।
भोटेकोशीमा बाढी पहिरोले निकै जनधनको क्षति पु¥याएको छ । वर्षायम भन्दा पहिले जस्तो थियो अहिले त्यस्तो छैन हिजो आज सम्म ठांडे खोलाहरुको छेउ र डाँडा काँडाको घरहरु पहिरोको कारण ढल्दै छ अहिले त पहिरोको उच्च जोखिममा संघर्षरत गरिरहेको छौं !
२) भोटेकोशी गाउँपालिका भित्र आएको बाढीपहिरो पछि भएको राहत र उद्वारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कम सक्रियता देखियो भन्ने आरोप छ नी खास के हो ?
जनप्रतिनिधि कम सक्रियता हुनु सक्ला कार्यपालिकाको बैठक नै राखेर जिम्मेवारी पूर्वक जनप्रतिनिधिहरुको टिम नै लागेको भए अलि सक्रियता जस्तो देखिन्थ्यो । त्यो भएन तर व्यक्तिगत रुपमा सुरुको घटना देखि म फिल्डमै छु । हुनु त म पनि जन्मेको भोटेकोशी मै हो बाढीपहिरो वर्षायाममा यसरी डाँडा काँडा पानी नभनी मेरो जीवनमै म पहिलो पटक घटना स्थल गाउँ–ंगाउँ जोखिम मोलेर भए पनि पुगें मैले मेरो तर्फ बाट सकिने गरेको छु भन्ने लाग्छ त्यो त तपाईले स्थानीय जनताहरुको पनि भनाई सुन्नु सक्नु हुनेछ !
३) त्यसो भए तपाईहरुले खेलेको भूमिकाको बारेमा प्रष्ट पारिदिनुहोस न त ।
पहिलो घटना झ्यालेमा घट्दा स्थानीयबाट खबर प्राप्त गर्न साथै नेपाल प्रहरी स्थानीय राजनीतिका दलका साथीहरु संघ संस्थाका साथीहरु लाई उद्दारमा लाग्न अनुरोध गर्दै उपल्लो तहका प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गर्दै उद्दारको लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था मिलाउनु होला भन्ने अनुरोध गरें । केही जनप्रतिनिधि कर्मचारी युवाहरू र म स्वयम घटनास्थलमा पु्ग्यौं त्यस्तै फुल्पिङको घटना पनि केही जनप्रतिनिधि युवाहरु सहित पुगेर नेपाली सेना, प्रहरी, स्थानीय युवा व्यवसायी साथीहरुलाई समन्वय गर्दै जिवितनै उद्धार गर्न सकेनांै तर शव निकाल्न समन्वय गरें । राहतको लागि पहल लिएं लार्चा घटनाको लागि पनि तातोपानी भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, संघसंस्थासंग समन्वय गर्दै भन्सारमा सुरक्षित स्थलमा राख्न समन्वय गरें । मलाई लाग्छ मैले निभाउनु पर्ने भूमिकामा मैले कमी गरेको छैन ।
४) तपाई भोटेकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुनुको नाताले पीडितहरुको उद्वार र राहतमा गाउँपालिकामा के कति अन्यन्त्रबाट सहयोग पाउनु भयो संक्षिप्तमा राखिदिनुहोस न ।
सहयोग त आएको छ । केन्द्र, प्रदेश सरकार र जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकार राजनीतिक दलहरु तथा स्थानीय युवाहरु लगाएत संघसंस्था तथा व्यापारी साथीहरुबाट आएको छ ।
५) यो विपद्को घडीमा पालिकाको अबको योजना कस्तो सोच्नु भएको छ ?
अब तत्कालीन राहत भन्दा पनि दिर्घकालीन उचित व्यवस्थापनको बारेमा सोच्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । अझै संकट आउनु सक्छ । जोखिम रहेको बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थलमा सार्न योजना बनाउनु पर्दछ । अरनिको सडक मात्र होइन गाउँ–गाउँ जाने सडकहरु पनि अवरुद्ध छन् । त्यसलाई समेत खोलेर कष्टकर बनेको भोटेकोशी बासी जनताहरुको दैनिकीमा सहज ल्याउने गरी गाउँपालिकाका राजनितिक दल संघसंस्था सबैसँग समन्वय सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने सोचेको छु ।
६) गत साल यहाँको पालिकाको समग्र काम कारवाही कस्तो रह्यो संक्षिप्तमा बताईदिनुहोस न ।
सुरुको वर्षहरु भन्दा गत साल केही क्षेत्रहरुमा सुधार गरेको छ । म खास न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले यही क्षेत्रमै पहिलेको भन्दा सुधार गरेको छु । अन्य कार्यहरु अनुगमनमा पनि केही सुधार गरेको छु ।
७) प्रसंग बदलौं, यतिबेला बाढी पहिरोका कारण तातोपानी नाका ठप्प छ । पालिकाको मूख्य आर्थिक स्रोत नै नाका थियो । तर बाढीपहिरोका कारण नाका फेरी पनि बन्द हुने अवस्था आएको छ । यो अवस्थामा पालिकाले कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ त ?
अहिले त सम्पूर्ण ध्यान राहत र जनताको सुरक्षा मै छ । तातोपानी नाकाको बारेमा स्थानीय व्यवसायीहरुले पनि पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने आएका छ । उपल्लो सरकारको प्रतिनिधिहरु दलका नेताहरुसंग अनुरोध पनि गरेको नै छु । अब अलि कोरोना तथा बर्षायम अलि समान्य भएपछि स्थानीय दल, व्यापारी व्यावसायी संस्थाको टिम सहित सम्बन्धित ठाउँहरुमा पहल लिने नै छौं ।
८) यहाँ एक जनप्रप्रतिनिधि तथा स्थानीयबासी समेत हुनुको नाताले तातोपानी नाकाको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
तिब्बत तीर ताल फुट्छ भन्ने हल्ला र न्यालममा सामान्य क्षति भन्दा केही भएको छैन । मितेरी पुल सम्म सडक राम्रो छ भन्ने खबर छ । नेपाल तिरको पनि बाह्रबिसे सडक खण्ड त हो धेरै क्षति भएको । केन्द्र, प्रदेश सरकार, व्यावासायी अन्य समाजको अग्रजहरु लाग्दा मैले त तातोपानी नाका बारे राम्रो नै देख्छु ।
९) गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समसस्या र चुनौति के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कति हो र केन्द्रीय सरकारले गरिदिन पर्ने कति हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या अरनिको राजमार्ग रहयो । यो राजमार्ग केन्द्र सरकारले बनाउने जिम्मा लिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । साथै प्रदेश सरकारले बाढिपहिरो पिडितलाई घर बनाउने भन्ने छ । घर बनाउने र गाउँहरु जाने सडकहरु बनाउने कुरामा पनि प्रदेशले नाला, ढल, वाल गर्ने हो भने केन्द्रले ग्रभिल पिच नै गर्दा हुने भयो । अन्य खुले सकेको नयाँ सडकहरुलाई स्तर उन्नती गर्न सके पालिकाले गर्ने नसके माथिल्लो सरकारलाई पहल गर्ने गरी अलि आपत विपदलाई समेत मध्यनजर गरेर अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने लाग्छद ।
अन्त्यमा तपाईको सिन्धुज्वाला अनलाईनलाई धन्यवाद दिदैं बाढीपहिरोबाट ज्यान गएको सबैमा श्रद्वाञ्जली व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । अझै जोखिम छ, सबै भोटेकोशी बासीहरु चनाखो हुँदै सुरक्षित स्थलमा बसौँ दुःखद यो समयमा भोटेकोशीको जनताहरुलाई देश विदेशबाट सहयोग गर्न हुनेहरु केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका स्थानीय सरकारहरु दलहरुको प्रतिनिधिहरु तथा कार्यकर्ताहरु, संघसंस्था, व्यापारी जनसुरक्षा निकाय, तातोपानी भन्सार कार्यालय लगाएत सहयोग गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछु । धन्यवाद